Hydrogeology: ihe ọ bụ, ihe ọ na-amụ na kedu ọrụ nke hydrogeologist | Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu banyere hydrogeology Anyị na-ezo aka na sayensị nke na-amụ mmalite na nhazi mmiri mmiri, ya na ụdị mmiri, mgbasa, ọchịchị, mmegharị dị iche iche na mmiri, n'etiti ndị ọzọ. A makwaara nkuzi mmụta sayensị a dị ka mmiri dị n'okpuru ala. Ọ bụ otu n'ime ngalaba dị mgbagwoju anya na geology.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ihe niile hydrogeology gụnyere na ebe ọ na-elekwasị anya, na mgbakwunye na mkpa ọ nwere.
1 Kedu ihe bụ hydrogeology
2 Obere akụkọ banyere hydrogeology
3 Ndị ọkachamara n'ihe banyere mmiri
4 Kedu ọrụ nke hydrogeologist na-arụ
4.1 Mmetụta na mmiri
Kedu ihe bụ hydrogeology
Ọ bụ sayensị nke lekwasịrị anya n’ịhụ mmalite na ntọala mmiri mmiri dị iche iche. Mmiri dị n’ime ala Ha bu uzo mmiri onunu nke puru inye oru ugbo, ulo oru, anu ulo na oriri nke mmadu. Sayensị a na-agba mbọ ịchọta ụdị mmiri dị mkpa nke mere na a na-ahụ nchịkọta mmiri dị n'ime mmiri zuru oke. Na mgbakwunye, ọ bụ ya na-ahụ maka ịmụ mgbasa nke ngagharị nke mmiri ndị a, ebe ọ nwere na ihe mmekọrịta ya na ugwu na ala ebe a hụrụ ha.
Otu n'ime ihe dị mkpa gbasara nyocha hydrogeology bụ ịmụ banyere anụ ahụ na kemịkalụ nke mmiri. Nke a bụ otú e si ekpebi ọnọdụ maka ojiji, iwu na mkpofu. Chọpụta ma mmiri mmiri nke ala nwere ike ịbụ ọkọnọ dị oke mgbagwoju anya. Yabụ, hydrogeology bụ ngalaba sayensị dị mgbagwoju anya.
Obere akụkọ banyere hydrogeology
Mgbanwe nke ọha mmadụ na mmepe nke teknụzụ emeela ka abawanye na mmiri ala. Nke a bụ n'ihi na ha bụ oke mmiri chọrọ ikike ịlele ma tụgharịa asụsụ iji chọta mmiri bara uru. Ọ dị mkpa inwe mmiri dị mfe ịnweta mere ka mmadụ nwee ike ịmepụta teknụzụ iji nwee ike ịnwụ mmiri site na isi mmiri ma mepụta ụzọ dị iche iche esi ewu olulu mmiri na veranda maka mmịpụta mmiri.
Site n'ebe ahụ, bụ mgbe 1836 hydrogeology nke oge a guzobere dịka sayensị. Enweghị akara ugo mmụta mahadum na hydrogeology dị ka nke a. Agbanyeghị, n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mahadum ọkachamara na-amụ ma mụọ omimi banyere hydrogeology. Ọrụ dị ka sayensị ala, injinịa, oke ọhịa na sayensị gburugburu. Enwekwara ọtụtụ ndị ọkachamara ndị ọzọ bụ ndị, dabere na ahụmịhe ọrụ ha, nwere ike ikpebi onwe ha dị ka ndị na-enyocha mmiri. Nke a bụ ebe ọ bụ na ọtụtụ ogo na-amụ ụfọdụ akụkụ sayensị nke mejupụtara dum bụ hydrogeology.
Ndị ọkachamara n'ihe banyere mmiri
N'otu aka, anyị nwere ndị na-amụ banyere ihe ndị dị ndụ bụ ndị metụtara mmụta nke ala na mmetọ site na microorganisms. Typedị ọkachamara ọzọ bụ onye na-ere ọgwụ. Ndị ọkachamara a kachasị na-ahụ maka nyocha mmiri na usoro ya dị iche iche iji chọpụta ogo mmiri. N'akụkụ aka nke ọzọ, ndị physics bụ ndị na-ahụ maka itinye ihe mmụta banyere mbara ala ga-eme hydrogeology.
N'ụzọ nke a, a hydrogeologist nwere ike ijikwa iche iche ihe ọmụma nke bughi geology, na stratigraphy, geology foto, geological nkewa wdg. Ọ dịkwa mkpa na ha ga-enwe ike ịmata ma mepee akụkụ ụfọdụ nke na-emetụta oke mmiri mmiri dị ka mmiri dị ka mmiri, ọmụmụ mmiri, kemịkal nyocha, mgbakọ na mwepụ na hydraulics.
Onye na-amụ banyere mmiri kwesịrị ịmata akụkụ niile dị mkpa nke geology ma nwee ike ịgbachitere onwe ya nke ọma na mkpọpu ala na usoro iwu dị iche na ewepụ akụ na ụba na iwu.
Ihe omuma banyere ihe banyere hydrogeologist banyere ihe omuma lithological bu ihe di nkpa iburu n'uche. Dịka ọmụmaatụ, hydrogeology dị na nkume ndị na-agbasighị ike, nke a kwadebere ma ọ bụ nke gbajiri agbaji, nwere ike iji usoro dị iche iche akọwapụtara yana ngwaọrụ ndị ọzọ mepụtara iche iche maka nke ọ bụla n'ime ha.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịnwe aha nke gị dị ka ọkachamara na hydrogeology iji bulie ogo ọrụ ahụ.
Kedu ọrụ nke hydrogeologist na-arụ
Iji mata ihe oru dibia mmiri, mmadu aghaghi ima ihe bu okwu di iche. Ọ bụ ọkachamara dị iche iche na-agba mbọ ịchọpụta ihe dị iche iche mmiri nwere ike ịnwe yana mmekọrịta ya na gburugburu ebe a hụrụ ya. Ndi mmadu ndi raara onwe ha nye ka ha buru ndi hydrogeologists nwere Àgwà onwe onye zụlitere ma metụtara njikọ gburugburu.
Isi niche ọrụ nke hydrogeologist nwere na nchịkwa ọha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ndị a na-etinyekarị na nchịkwa ọha ma ọ bụ na ngalaba kwụ ọtọ dị ka IGME nwere ike ịme ya na steeti ma ọ bụ n'ụzọ kwụ ọtọ. Ndị etinyere na ụlọ ọrụ nkeonwe bụ akụkụ nke ndị ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ ma ọ bụ Ha nwekwara ike ịrụ ọrụ maka ndị ndụmọdụ dịka ọkachamara na-akwụghị ụgwọ. Ihe a niile dabere na mkpa ịkọ akụkọ na ọmụmụ ihe mpaghara.
Ekwesiri iburu n’uche na ndi hydrogeologist bu ihe di nkpa imuta ihe ndi nwere ike ime na mmiri ala nke oru mmadu. Yabụ, ọ ga-enwerịrị ikike ịchọ mgbanwe na ikike nyocha iji mata mmetụta dị iche iche emere na gburugburu ebe obibi. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwerịrị ike ịmata etu esi enyocha ma mmetọ a kapịrị ọnụ ma na-agbasasị nke enwere ike ịhụ ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi na aquifer dị na ajụjụ, ma ọ bụ n'ụzọ a na-achịkwa ma ọ bụ nke a na-achịkwaghị achịkwa.
Mmetụta na mmiri
N'aka nke ọzọ, ọ ga-atụle mmetụta nke ọrụ dị iche iche nke mmadụ dị ka ọrụ obodo, igwu ala, egwu, na ndị ọzọ, nwere ike inwe na mmiri mmiri. N'ihi ihe ndị a niile a kpọtụrụ aha, ọrụ nke mmiri mmiri na-agụnye ịme ọmụmụ hydrogeological na-adabere na ya guzosie ike ma ọ bụ na enweghị ụdị mmetụta ọ bụla na mmiri mmiri nke aquifer ma chọpụta ụzọ iji dozie ma ọ bụ mebie mmetụta ya.
Ndị ọrụ a na-achọkarị ọrụ ndị a na ndị ahịa ha bụ ụlọ ọrụ na ndị chọrọ ka ha bido ma ọ bụ gaa n'ihu ọrụ ha. Nkwadebe nke akụkọ ndị a na-eme mmiri na-enye ihe ọmụma banyere ọkwa si n'ụlọ ọrụ dị iche iche dịka anụ ụlọ, ụlọ ọrụ dị iche iche, osisi ọgwụgwọ, ebe mkpofu, wdg.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe hydrogeology bụ na gịnị bụ ọrụ nke hydrogeologist.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ihe bụ hydrogeology na gịnị ka ọ na-amụ
Ugbu a ọrụ mahadum ebe a na-akụzikwu banyere mmiri hydrology bụ GEOLOGICAL ENGINEERING
Ọ dị m ka ya bụrụ na e nwee ọtụtụ ndị na-amụ banyere mmiri na ndị na-amụ banyere mmanụ ala. Achọghị m ikwu na nke abụọ ahụ adịchaghị mkpa, mana ọmụmụ na nlekọta nke mmiri mmiri n’ime iri afọ gara aga ga-abụ nke kachasị mkpa maka mmepe nke ọha mmadụ.
Zaghachi Bruno Andrenacci
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara biotite